तपाईको (मंगलबार, साउन १९ को राशीफल) -
२०७८, १९ श्रावण मंगलवार ००:४१ August 3, 2021 clickonLeaveaComment on तपाईको (मंगलबार, साउन १९ को राशीफल)
आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। विश्वासको कमी हुन नदिनुहोस् किनकि यसले मात्रै तपाईंको समस्या जटिल हुनेछ र आफ्नो प्रगतिमा बाधा आउन सक्छ। आफैमा विश्वास गरेर पुनः आफ्नो मुस्कान पुन प्राप्त गर्ने र समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। परिवारका केही महिला सदस्यको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता हुन सक्छ। तपाईंका आँसु कुनै विशेष मित्रले पुछिदिन सक्छ। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंका दृष्टिकोणको समर्थन गर्नेछन्। तपाईंले आफ्नो प्रियलाई उनको पछिल्लो भावशून्यताका लागि क्षमा गरेर आफ्नो जीवन लायक बनाउनु हुनेछ। तपाईं काममा गल्ती स्वीकार गर्नेहरू तपाईंको पक्षमा जानेछन्। तर तपाईंले यसलाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। तपाईंले जसलाई हानि पुर्याउनुभएको छ त्योसँग माफी माग्नुपर्छ। सबैको गल्ती हुन्छ तर मूर्खले मात्रै तिनीहरूलाई बारम्बार दोहोर्याउँछ भन्ने जान्नुहोस्। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
मानसिक शान्तिको लागि आफ्नो तनाउ बाहिर निकाल्नुहोस्। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन्। आनन्दित – ऊर्जावान र मायालु मुडमा तपाईंको हंसमुख प्रकृतिले आफ्ना वरिपरि आनन्द र खुशियाली ल्याउँछ। आज आफ्नो प्रियलाई क्षमा गर्न नबिर्सनुहोस्। काममा ढिलो प्रगति भएकोले केही तनाउ ल्याउँछ। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। तपाईंलाई मद्दत गर्न यथासक्दो प्रयास गर्ने बयोवृद्ध व्यक्तिहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षा व्यक्त गर्नुहोस्। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले आज तपाईंको जोडीको धेरै चासो लिन सक्छ, तर केही नराम्रो भएको छैन भन्ने तपाईंलाई दिनको अन्तमा महसुस हुनेछ।
तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। आफ्नी प्रियतमालाई बुझ्ने गर्नुहोस्। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। आज, तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै गहिरो आत्मीय प्रेमालाप गर्नु हुनेछ।
तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। आफ्ना पाहुनाहरूसँग अशिष्ट नहुनुहोस्। तपाईंको व्यवहारले आफ्नो परिवारमा समस्या मात्र होइन, सम्बन्धमा पनि शून्यताको सिर्जना गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। परिवारमा भएको समारोहमा नयाँ मित्र बनाउनु हुनेछ। तर चयन गर्दा सावधान हुनुहोस्। असल मित्रहरू तपाईंले सधैं संरक्षण गर्न चाहनुहुने धन जस्तै हुन्। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। तपाईं र आफ्नो साथीबीच आज फरक सोच हुनाले तर्क हुन सक्छ।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउने धेरै राम्रो दिन हो। एउटा परिवारमा संलग्न दुवै मानिसहरू प्रेममा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो पार्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहोस् र सकारात्मक रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न राम्रो तरिकाले योजना बनाउनुहोस् – कार्यालयको समस्या सल्टाउने प्रयास गर्दा तनाउले तपाईंको मन ढाकिदिन्छ। आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। तपाईंले सामाजिक मिडियामा वैवाहिक जीवनका ठट्यौलीहरू पाइ राख्नु हुन्छ, तर आज तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवन बारेमा अचम्म लाग्ने सुन्दर तथ्य आफ्नो अगाडि आउँदा साँच्चै भावुक हुनु हुनेछ।
धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। तपाईंका साथीहरूलाई आफ्नो उदार स्वभावको फाइदा नदिनुहोस्। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। आज उँचो प्रदर्शन र उँचो प्रोफाइलको लागि दिन हो। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। तपाईं आज आफ्नो पैसालाई लिएर समस्यामा पर्नुहुनेछ – तपाईंले बढी खर्च गर्नुहुन्छ वा आफ्नो वालेट गलत ठाउँमा राख्नु हुनेछ – बेवास्ताले गर्दा केही घाटा निश्चित छ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। काममा तपाईंको सफलताको बाटो रोक्नेहरूलाई आज तपाईंले आफ्नै आँखा अगाडि गंभीर पतन भएको देख्नु हुनेछ। तपाईंलाई सबैभन्दा गर्न मन लाग्ने कुराहरूको सामाजिकरण र पालनको लागि आज समय छ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। तपाईंलाई आज धेरै नयाँ वित्तीय योजनाहरु प्रस्तुत गरिनेछ – प्रतिबद्धता बनाउनु अघि फाइदा र हानिको राम्ररी वजन गर्नुहोस्। गृहप्रवेश समारोहको लागि शुभ दिन। विगतका रमाइला सम्झनाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछ। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
तपाईको (आईतबार पौष २६) को राशीफल
२०७७, २६ पुष आईतवार ०४:३७ January 10, 2021 clickon
तपाईको (शनिबार २०७६ चैत्र २९) को राशीफल
२०७६, २९ चैत्र शनिबार ०३:१९ April 11, 2020 clickon
तपाईको (शुक्रबार जेष्ठ १६) को राशीफल
२०७७, १६ जेष्ठ शुक्रबार ००:३५ May 29, 2020 clickon